Nagarik News - महासंघको ४८औं साधारण सभा
11 Apr 2014 | 09:38am
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (नेउवामहासंघ) को ४८औं साधारण सभा आज (शुक्रबार) सुरु हुँदैछ। सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको महासंघको यो साधारण सभाले आगामी तीनवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। आसन्न चुनावको मैदानमा दुई समूह उत्रेका छन्। अध्यक्षमा आजसम्मका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार र उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रस्तुत छ, दुवै प्रत्यासीसँग चुनावको एजेन्डा, निजी क्षेत्रका समस्या र चुनावी माहोलको विषयमा नागरिककर्मी प्रकटकुमार शिशिर र सुजन ओलीले गरेको कुराकानी।
चुनावपछि एकजुट नभए मुद्दा ओझेलमा
निर्वाचनका प्राथमिकता के के हुन्?
मैले निजी क्षेत्रको सशक्तीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु। निजी क्षेत्र बलियो र सुदृढ नभई देशको विकास सम्भव छैन। अर्को कुरा निजी क्षेत्र पनि सुधि्रनु आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा पनि बिकृति छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष पहल गर्नेछु। निजी क्षेत्र इमानदार, पारदर्शी र उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने खालको हुनुपर्छ। त्यतिमात्र नभई राज्यले निजी क्षेत्रलाई कुन स्तरमा राख्ने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्छ, म त्यसका लागि हरपल लागिरहने छु। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले सामाजिक आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि यसको स्तरबारे राज्यले हामीलाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ। त्यसैगरी, हाम्रा जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीय निकायको अभावमा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि निजी क्षेत्रलाई नाफा र घाटासँग जोडेरमात्र हेरिन हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। मैले 'चेम्बर ल' कुरा अघि सारेको छु। हामीले धेरै वर्षदेखि चेम्बर ल मागिरहेका छौं। महासंघको विधानमा पनि धेरै प्रावधान पुराना छन्। त्यसलाई पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्छ। महासंघमा हरेक नयाँ कार्यसमितिले विधान संशोधन गर्न समिति बनाउँछ। तर, त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन।
सरकारसँगको अपेक्षा के हो? सरकारसँग कसरी काम गर्नुहुन्छ?
अहिले पनि आधा दर्जनभन्दा बढी आर्थिक विधेयक संसदमा थन्किएका छन्। जसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा आर्थिक गतिविधि अघि बढन सकेको छैन। आर्थिक विकासका लागि आवश्यक विधेयक सरकारले तत्काल पारित गर्नुपर्छ। सरकारले आर्थिक नीति खुकुलो पार्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा नेपालमा लगानीको सुरक्षासमेत हुन सकेको छैन। सानादेखि ठूला लगानीकर्तासम्मको लगानीको सुरक्षा छैन। सरकारले व्यवसायीको लगानी सुरक्षा गर्न सक्यो भनेमात्र पनि देश आर्थिक रुपमा सबल बन्न सक्छ, उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा दक्ष जनशक्ति बिदेसिनु पर्दैन। सरकारले कानुनी जटिलता हटाइदिनु पर्‍यो र लगानीको वातावरण मिलाइदिनु पर्यो । देशमा स्वदेशी लगानी हुन सकेमात्र विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना हुन्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले नै देशमा लगानी गरेका छैनन् भने विदेशी आउने सम्भावना कम हुन्छ। अहिले भइरहेको उद्योगले ४० प्रतिशतमात्र उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई बढाएर ६० प्रतिशतमात्र पुर्याउउन सकियो भने पनि देश आर्थिक रुपमा अगाडि बढ्छ। सरकार पनि राजस्वलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढनु हुँदैन। उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुनासाथ राजस्व स्वतः बढ्छ। हाम्रा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्। त्यसैगरी, स्थानीय पहिचानसहितका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा पर्यटक भिœयाउन सक्यौंमात्र भने पनि देश आर्थिक रुपमा सबल बन्न सक्छ।
तपाईंहरुमा तल्लो तहसम्मै विभाजन छ। निर्वाचित भइसकेपछि यो विभाजनलाई कसरी मेट्नुहुन्छ?
मैले विभिन्न कार्यक्रम तथा सभास्थलमा नै भनिसकेको छु– यदि जित मेरो पक्षमा आयो भने सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान्छु। चुनावपछि हामी एकजुट हुन सकेनौं भने महासंघका धेरै मुद्दा ओझेलमा पर्ने हुँदा म कहिल्यै पनि अर्को प्यानललाई विपक्षमा राखेर जाने छैन। यस्तो विभाजन भनेको चुनावअघि मात्र हुन्छ। हामीले सरकारसँग विभिन्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक ऐन मागिराखेका छौं। यस्तो अवस्थामा हामी एकताबद्ध हुन सकेनौं भने सरकारसँग लड्न अप्ठेरो पर्छ। त्यसैले पनि चुनावपछि प्रदीपजंगजीले जिते पनि मैले जिते पनि महासंघलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान प्रतिबद्ध छु।
तपाईंहरु राजनीति सङ्लिनुपर्छ अनिमात्र लगानी आउँछ भन्नुहुन्छ। अनि आफैं समर्थन खोज्दै दलका ढोका चाहार्नुहुन्छ। किन यस्तो?
हामी उद्योगी व्यवसायी आफैं राजनीति सङ्लिनुपर्छ भन्छौं, र हो पनि। राजनीतिक स्थायित्वबिना लगानीको सम्भावना छैन र लगानी विस्तार पनि हुँदैन। तर, यसो भन्दैमा व्यवसायी लगानी गर्न छोडेर बस्छन् भन्ने होइन। लगानी विस्तारका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। तर, दुर्भाग्य केही उम्मेदवार राजनीतिक दलको ढोकामा पुगेको पाइएको छ। यो गलत प्रवृत्ति हो। नेपाल सरकारपछिको सबैभन्दा बढी सञ्जाल भएको निकाय महासंघ हो। यत्रो ठूलो संस्थाको साधारण सभा हुँदा राजनीतिक दलले चासो राख्नु स्वाभाविक हो। तर, उम्मेदवार बनेका व्यक्ति नै दलको शरणमा जानु गल्ती हो। हामीले सबै दलसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। उनीहरूसँग सहकार्यबिना महासंघलाई पनि काम गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले सहकार्य आवश्यक छ।
व्यापारघाटा चुनौतीपूर्ण बनिरहेको बेला यसलाई कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ। तर व्यवसायी व्यापारमात्र गर्छन्, यसमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ?
व्यापार घाटा बढ्नको मुख्य कारण उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार हुन नसक्नु हो। जबसम्म उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिँदैन तबसम्म व्यापार घाटा कम गर्न गाह्रो हुन्छ। र अर्को कुरा सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई १० देखि १५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। यसबाट निर्यात वृद्धि भई आयात घटन सक्छ। व्यवसायीलाई सरकारले निश्चित कोटा तोकिदिनु पर्छ। जस्तो एक अर्ब रुपैयाँबराबको वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन सके अन्य उद्योगलाई पनि निर्यात गर्न उत्साह मिल्छ। तर, सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई भन्दा व्यापारीलाई सहयोग गर्ने खालको नीति लिएको छ। जसले गर्दा व्यापार घाटा बढेको हो।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा तपाईंको धारणा के हो?
नेपाली पुँजी देशबाहिर लगानी गर्ने जस्ता मुद्दा अहिले व्यापक रुपमा उठेका छन्। लगानी भनेको पानी जस्तो हो, जता भिरालो छ त्यतै बग्छ। त्यसैले पनि लगानी, सीप, क्षमता र प्रतिस्पर्धा रोक्न सकिँदैन। यो अवस्थामा अहिले हामी वैदेशिक लगानी ऐन निर्माण चरणमा छौं। त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वदेशमै वार्षिक साढे चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। नेपालीलाई ज्ञान र सीपका आधारमा विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ। स्वदेशमा लगानी भिœयाउनेसँगै विदेशमा नेपाली लगानीकर्तालाई अवसर दिने विषयमा विभिन्न चर्चा चलिरहेको छ। यस विषयमा हामी संकीर्ण सोचबाट मुक्त हुन जरुरी छ।
पछिल्लो समय महासंघको चुनाव ज्यादै खर्चिलो हुँदै गएको आभाष मिल्छ। चुनावमा खर्च प्रधान र एजेन्डा गौण हुँदा महासंघ कमजोर हुँदैन?
चुनावका लागि आउने मानिसलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्दा नै धेरै खर्च लाग्छ। जस्तै, जिल्लाबाट काठमाडौं आउने सदस्यलाई खानपानको व्यवस्था गर्दा। यसले गर्दा चुनाव केही खर्चिलो भएको हो। तर, पनि हामी दुवैले खर्च न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रयास गरेका छौं। यस वर्ष विगतको तुलनामा खर्च केही कम हुने सम्भावना छ। महासंघ पैसा हुनेको संस्था हो पैसाले भोट किन्ने संस्था होइन र यस्तो हुन पनि दिनु हुन्न। खर्च कम गर्नकै लागि अहिलेसम्म मैले आफ्नो कार्यक्रम सामान्य होटलमा राखेको छु। पाँचतारे होटलमा गरेको छैन।
चुनावमा मात्रै विभाजन : प्रदीपजंग पाण्डे
विदेशमा लगानी गर्दा प्रतिफल स्वदेश फर्कने गरी गर्नुपर्छ। जस्तो खाडी मुलुकको निर्माण कम्पनीमा नेपालीले लगानी गर्योम भने प्रतिफल नेपालले पाउँछ। चीनमा स्कुल कलेज खोलेर के काम?
महासंघ सबै उद्योगी व्यापारीको छाता संगठन हो। व्यवसायीको हक, हित नै पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। फराकिलो दायरा भएको महासंघमा सबै तह र तप्काका व्यवसायी छन्। हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ। निर्वाचनको प्राथमिकतामा व्यवसाय र उद्योगले गर्न सक्ने विकासका विषय पनि छन्। जिल्लाका व्यवसायीका गुनासो र समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्नेछ। सबै क्षेत्रका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्मका चासो प्राथमिकतामा छन्। उत्पादन, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, सेवालगायत सबै क्षेत्रमा समस्या छन्। यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने योजना छ। सक्ने काम गर्छु, नसक्नेमा जान्न। त्यस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विषयमा पनि म प्रस्ट छु। त्यसको विकासलाई पनि सँगसँगै लैजाने योजना छ।
सरकारसँगको अपेक्षा के हो? ऊसँग कसरी काम गर्नुहुन्छ?
नेपाली उद्योगी व्यवसायीले सहुलियत खोजेका छैनन्। अन्य मुलुकमा सरकारले आफैं तपाईंलाई यो यो सुविधा दिइन्छ, यी यी कानुन अनुकूल गराइदिन्छौं भन्छ। हामीकहाँ उद्योग व्यवसायको समस्यालाई सरकारले आफ्नो समस्या सम्भि्कदिए पुग्छ। एउटा भावना उद्योगी व्यवसायीप्रति देखाउन सक्नुपर्छ। स्वदेशी वस्तु महँगो भए पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ। ती वस्तु प्रयोगमा सरकारले सहयोग गर्न सक्छ। भएको नियम कार्यान्वयन गराउन सक्छ। स्वदेशी सामान भएसम्म स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्छ, प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसरी नै उद्योग व्यवसायको विकास हुन्छ। उद्योग चलाउने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्छ। विभिन्न कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदै गएका छन्। सरकारको ध्यान त्यतातिर जान जरुरी छ। विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ। उद्योग चलाउनेलाई विदेशमा जस्तै सुविधा दिनुपर्छ।
चुनावी प्रक्रियामा जाँदा विभाजन देखिएको मात्र हो। हामी विभाजित छैनौं। सँगसँगै काम गरेर आएको हो, अब पनि सँगै गर्छौं। मेरो लागि चुनावमा कुनै प्यानल छैन। मेरा लागि सबै व्यवसायी, उम्मेदवार एकै हुन्। हामीकहाँ ३२ जना उम्मेदवार पनि पुगेको छैन। उता १५, यता १४ जना। त्यसैले आउनुपर्ने साथी बाँकी नै छन्। कुन उम्मेदवार आउँछ भन्ने पनि थाहा छ। हामी सबैको समस्या एउटै हो, मर्म एउटै हो। चुनावपछि यताको मान्छे उता हुन्छन्, उताका यता हुन्छन्। यसलाई एउटै उद्देश्यमा, एउटै संस्कारमा, एउटै धार र मुद्दामा लाने काम हुन्छ। अर्काे प्यानलबाट आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। हामी गुटउपगुटमा जान्नौं। त्यसमा विश्वास पनि गर्दैनौं। क्षमता, आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता तय हुन्छ। चुनावअघि नदीका दुईवटा किनार हुन्छ चुनावपछि एउटै नदी भएर बग्छ।
जहाँसम्म चुनावमा दलको ढोका पुग्ने कुरा छ। हामी आफैंले राजनीतिक दलको सदस्य महासंघको सदस्य हुन नपाउने विधान बनाएका छौं। तर पनि अझै कतिपय दुवैतिर सदस्य भएर हिडिँरहेका छन्। हामी महासंघमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौं। अरु को कहाँ हिडिँरहेका छन् त्यो त मलाई थाहा भएन। यो व्यवसायीको संस्था हो यसमा सत्ता पाउनु पनि छैन, तलबभत्ता पाउनु पनि छैन। आफ्नो व्यवसाय चलाउनुपर्छ, आफ्नै हात, पाखुरा चलाउनुपर्छ। तर, चुनावमा दल, प्रहरी प्रसाशन, शक्ति लगाउने कुरा युक्तिसंगत होइन।
समयअनुसार समस्या देखिँदै आएका छन्। लोडसेडिङको समस्या जहिल्यै उस्तै छ। विगतमा श्रम समस्या पनि उस्तै थियो। अहिले श्रम समस्या सुधार हुँदै गएको छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरुले एकल ट्रेड युनियनलाई स्वीकार्नु पर्छ। युनियनबाट पनि समस्या छ। श्रमिक र कामदारको दक्षता बढाउनुपर्नेमा कसैले ध्यान दिँदैन। तर व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने काम जताबाट पनि हुन्छ। यसरी हेर्दा उत्पादन क्षेत्रलाई दिगो गराउन गाह्रो देखिन्छ। त्यसैले मान्छेले सजिलो हेरेको हो। पसल, होटल, अस्पताल खोल्यो, व्यापार गर्योत। त्यसपछि व्यापार बढ्यो। अहिले सियोको काम गर्योस, राम्रो भए हवाईजहाजको काम गर्न सकिन्छ। तर उद्योगमा लगानी गरिसकेपछि संरचना परिवर्तन गर्ने गाह्रो हुन्छ। बैंकहरुको ऋण परेको हुन्छ, कर्मचारीप्रतिको दायित्व हुन्छ। त्यसैले उद्योगभित्र राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने समस्या नै समस्या देखिन्छ। उद्योगको समस्या समाधान गर्न बुझेको मान्छे चाहिन्छ भन्ने कारण पनि यही हो। उद्योगमैत्री वातावरण चाहिन्छ र ऐननियम चाहिन्छ। त्यसो भयो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ।
यसमा दुईवटा 'स्कुल अफ थट' आउँछ। औद्योगिक ऐन बनाउँदा मैले चार वर्ष काम गरेँ। अन्तिममा विदेशी लगानी र प्रविधि ऐन आउन लाग्यो। म आफैंले विरोध गरेँ, देशको पैसा बाहिर लैजान हुँदैन भनेर। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने खाडी मुलुकमा हाम्रा दाजुभाइ धेरै गएका छन्। तर हामीले सीप सिकाएर पठाउन सकेका छैनौं। सीप राम्रो भयो भने तलब पनि धेरै हुन्थ्यो। कामदार र पैसा दुवै विदेश जानु राम्रो होइन। बाहिर लगानी गर्ने हो भने प्रतिफल स्वदेशमै आउनुपर्योे। जस्तो खाडी मुलुकमा नेपालीको निर्माण कम्पनी भयो भने नेपाली कामदारले राम्रो सुविधा पाउँछन्। त्यसको प्रतिफल नेपालले पाउँछ। चीनमा गएर स्कुल कलेज खोलेर के काम? जस्तो नेपालमा डाबरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन्। तिनले नाफा गरेको छ तर पैसा बाहिर गएको छ। हामीले पनि बाहिर लगानी गर्दा प्रतिफल स्वदेश आउनुपर्छ। आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा ठाउँ छ भने सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।
हरेक चुनाव प्रतिस्पर्धाका लागि बलियो हुँदै गएका छन्। प्रतिस्पर्धा बढ्नेबित्तिकै खर्च बढ्ने नै भयो। तर यसलाई सिस्टममा ल्याउन सकियो भने पैसा खर्च हुँदैन। उद्यमशीलता बोकेका, व्यवसायीलाई बुझेका उम्मेदवार भए भने पैसा खर्च हुँदैन। राम्रो सदस्य भयो भने, विवेकशील भयो भने कसैको प्रभावमा भोट हाल्दैन। सदस्यले पनि राम्रो मान्छे छान्छन् नि। को आयो भने कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ। जहाँसम्म एजेन्डाको कुरा छ। चुनावमा एजेन्डा नै मुख्य कुरा हो। यो गौण हुँदै हुँदैन। एजेन्डाका आधारमा नै उम्मेदवार तय हुने र निर्वाचित हुने हो।